Nidaamyada GIS lacag la'aan ah, maxaad u caan ahayn?
Waxaan ka tagaa meel bannaan si ay u noqoto mid caqli gal ah; meesha bannaan ee akhrinta maqaalada waa mid gaaban, sidaas darteed waxaan u digay, waa inaan noqonaa mid fudud. Markaan ka hadleyno "qalab bilaash ah GIS", laba kooxood oo askar ah ayaa u muuqda: aqlabiyad ballaaran oo ka jawaabeysa su'aasha ... iyo maxay yihiin kuwa? ... oo waxaa jira dad isticmaala iyaga?
Markii hore waxaanu qiimeynay kharashyada ruqsadaha ah ee ku yaalla goobaha GIS, ugu yaraan kuwa taageera sQLServer 2008. Tani waa falanqeyn ay sameysay Petz, maalin ay ahayd inay sameyso go'aan ah in ay hirgeliso adeegga khariidada (IMS). Tani, wuxuu sameeyay isbarbardhigga markii ay adagtahay in la isku daro labo macaamiil heer sare ah si loo diyaariyo ...
Ka beddel GoogleEarth ilaa AutoCAD, ArcView iyo qaabab kale
Inkasta oo waxyaalahan oo dhan waxaa la samayn karaa iyadoo apps sida kala cayncayn ah, ama ArcGis kaliya furo KML iyo dhoofin format waxay doonayeen, baadhaan KML Google si dxf waa kordhiyo. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah muuqaalada ay bixiyaan arday ee jaamacadda Arizona xogta free si loogu badalo ka qaabab Google Earth ...
ArcView Google Earth GPS KML GIS kala cayncayn ah SHP
Warka ugu fiican ee ku saabsan SQL Server Express
Maanta waxaan haystaa warka wanaagsan, SQL Server Express 2008 waxay taageertaa xogta joogtada ah. Kuwa ka tagay shakiga ah muhiimada wargeyskan, Server Express waa nooca bilaashka ah ee SQL kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku hirgeliso codsiyada GIS on platformada dhexe, haddii kale waxaanu isticmaali karnaa MySQL ...
ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS, GIS kala cayncayn ah
Pro in images GoogleEarth leeyihiin xal ka wanaagsan?
Sida cad waxaa jira jahawareer ku saabsan waxa ay bixiyaan qaybaha Google ee bixiya, qaar ayaa aaminsanyihiin in khidadaha xalinta khidmadaha si wanaagsan loo helo. Hase-yeeshee, waxaad helaysaa xalin fiican, laakiin maahan wax dheeraad ah oo ka badan inta aan aragno, waxa qalabkani soo bandhigayaa waa tayada wax soo saar ee wanaagsan, tusaale ahaan, arag, daabac, kaydso ama soo dir ...
Earth Virtual images cusub (Nov 07)
Iyada oo ku qanacsanaanta weyn waxaan u cusbooneysiin sawirka dayax-xalinta sare ee bisha November, Virtual Earth, image muujiso Mataro, halkaas oo ahaa sawir lahayn tayada this. Kuwani waa meelo Spanish hadla simay: (Eye Bird ayaa) Spain: Malaga, Alicante, Almeria, horumarinta Villalba, Cuenca, El Ejido, Guadalajara, Leon, Molina de Segura, Santiago ...
Geospatial - GIS, dalwaddii Earth
teknoolajiyada Horaantii kuwaas oo dhaqan Systems kala cayncayn ah ayaa ogaaday horumarka yar ee soo koraya awoodaha la SQL madal sooci 2007, keenaya baahida weyn ilaa barnaamaj waxa aad ma uu samayn karin oo leh liisanka "soo box" SQL. Muhiimadda mawduucan waa sababta oo ah isticmaalka SQL ...
Khariidadaha Khariidada: waxay abuuraan khariidado, lacag ku kasbadaan
Khidmadaha Khidmadu waa adeeg aad u xiiso badan, kaas oo aan u yaqaanay mahadsanida sawirrada, shaqadoodu waa mid xoogan oo waxtar leh: 1. Waxay u shaqaysaa sidii jiheeye Qaacido, markaad iska diiwaangeliso oo keliya waxaad u baahan tahay inaad tagto tallaabo tallaabo tallaabo ah oo aad dooranayso meesha aad ku kaydisay kml ama faylka gaaska, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa khariidada ...
Geospatial - GIS, Google Earth / Maps, Sii jiritaanka blogs
Sida loo kordhiyo faylka kml ee khariidada
Si aad ku dari map a si blog xaq u leeyihiin in ay u Customize ka maps google, si kastaba ha ahaatee in lagu daro ah map KML gundhig waa suurto gal, kaliya aad qabto in aad ku darto in silsiladda & KML = ka dibna url ee fayl KML ah, kaas oo sidoo kale noqon kartaa a Khariidada waxaa lagu sameeyay mishiinnada googliyada. Haddii aadan rabin ...
Caqabad ku ah geofumadores, khariidado nacayb ah :)
Kuwa jecel caqabadaha geospaatiga halkan waxay ka yimaadaa waxyaabo ay ka mid yihiin Louis S. Pereiro, gabayaaga Isbaanish ah ee waqtigiisa niyad-jabka ku talinaya in ay suurtogal noqoto inay sameyso khariidado naceyb ah. Waa hagaag, si aad u aragto in qof lagu dhiirigeliyo :) CARTOGRAPHY Sidii hore u dhacday ama la igufsaday anigaa aniga ila hadlaya, aniguna waxaan seexanayaa musiibo. Waa inay noqotaa ...
Inkastoo Blogger waa apliacación ee Google, waxaa aad u adag in la helo artilfugios (widgets) ama plugins diyaar u ah inay ka baxsan fuliyo gelin map soo bandhigay Google oo kaliya soo jeedinaya isticmaasho API oo kadis ah waa Casharrada aad u adag laakiin kuwo yar iyo waa xoogaa ka timaha qaaday. Si kastaba ha ahaatee kiiska ...
Geospatial - GIS, Google Earth / Maps, Internet iyo Blogs
Maqnaansho aan ku saleysan sawirro
Dhawr sano ka hor, at kulanka sannadlaha ah ee "Sourveying iyo Uruurinta" US xusa isagoo goob joog jiiddo kuwa aad ka tagto afkaaga la furan, ma ahan oo keliya sababtoo ah Ingiriisi tacliimeed kuma habboona caliche gringo ah. Waxay ahayd bandhig ah oo Kevin Sahr, Jon Kimerling iyo Denis ...
ESRI's ArcGIS waa qalabka ugu caansan Nidaamka Macluumaadka Juqraafiyeed (GIS), ka dib markii ay horudhac u ahaayeen ArcView 3x si aad ah loo adeegsaday sagaalkii. Manifold, sida aynu horay ugu yeeray "A $ 245 GIS tool" waa qaab cusub, oo hoos yimaada qaab dhismeed oo kala duwan, si kastaba ha ahaatee userka waa ...
Tani waxay noqon doontaa boostada ugu horeysa ee aan doonayo in aan ka hadlo Manifold, ka dib ku dhawaad ​​hal sano oo cayaar ah, iyada oo la adeegsanayo iyo horumarinta araajida qaar ka mid ah meeshan. Sababta keentay inaan taabto arintan, waa sanad ka hor, waxaan u baahday inaan go'aan ka gaaro iibsigaan iyo bogag kooban oo aan helay halka ...
GIS kala cayncayn ah My aragti ugu horeysay
Geospatial - GIS, GIS kala cayncayn ah, aragti ugu horeysay
Boggii hore Page 1 ... Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 page Next